Apple waxay $ 50 Milyan ku maalgelinaysaa Madxafka Madaxbanaan ee Madasha UnitedMasters | Waxaan ka socdaa mac
Apple waxay $ 50 milyan ku maalgelinaysaa madasha fannaaniinta madaxa bannaan ee UnitedMasters
Qeybinta muusikada madaxa-bannaan ee UnitedMasters ayaa hadda ku dhawaaqday wareeg cusub oo maalgelin ah, wareega maalgelinta oo uu hogaaminayo Apple oo leh 50 milyan ee dollar iyo halka sidoo kale laga helo Xarfaha iyo A16z. Madalkan waxaa loo sameeyay si ay farshaxanlayaashu u ilaashadaan lahaanshaha buuxa ee shaqadooda oo aysan ugu gudbin gacanta shirkadaha diiwaan geliya, sidii had iyo jeerba jirtay.
Intaa waxaa dheer, waxay u oggolaaneysaa iyaga balaadhi fursadahaaga dhaqaale gaarsiinta malaayiin taageerayaal cusub. Barxadani waxay siisaa muusikiisteyaasha marin u helida dhammaan macluumaadka la xiriira waxa ay abuurayaan, awoodda ay ula falgalaan kuwa raacsan iyaga oo abuuraya waxyaabo cusub, iyo dariiq toosan oo badan oo lagu bixiyo tigidhada riwaayadda, baayacmushtarka iyo dadaallada kale ee ganacsiga.
Steve Toute, agaasimaha guud ee UnitedMasters wuxuu leeyahay:
Waxaan rabnaa dhamaan fanaaniinta inay helaan fursado isku mid ah. Xilligan, fanaaniinta madaxa banaan waxay leeyihiin fursad yar oo guul waxaana isku dayeynaa inaan meesha ka saarno cuqdadaas.
Farshaxanistayaasha oo dhami waxay u baahan yihiin inay marin u yeeshaan CTO. Qayb ka mid ah qiimaha waxa maamule maanta u yahay fanaan waa in lagu wareejiyaa doorkaas.
Tusaale heshiisyada UnitedMasters ay gaareen si kor loogu qaado fannaaniinta madaxa-bannaan waxaa laga heli karaa kuwa kala duwan heshiisyadii la gaadhay sanadihii la soo dhaafay oo leh NBA, ESPN, TikTok iyo Twitch iyo kuwa kale.
Heshiisyadan ayaa u oggolaaday fannaaniintu inay heshiisyo la galaan shirkado waaweyn oo, dhaqan ahaan, waxaa kala xaajoon lahaa shirkadaha diiwaanka.
Ka dib markii lagu dhawaaqay, Eddy Cue wuxuu yiri:
Steve Stoute iyo UnitedMasters waxay abuureyaasha u fidiyaan fursado badan oo ay ku hormariyaan shaqadooda uguna keenaan muusikadooda adduunka. Ku-biirinta fanaaniinta madax-bannaan waxay door muhiim ah ka ciyaaraan wadista koritaanka sii socda iyo guusha warshadaha muusikada, iyo UnitedMasters, sida Apple, waxay u heellan tahay inay awood u siiso abuurayaasha.
Waxay u egtahay in howlgalka barxadani uu adiga badan kugu maqlayo Apple Music Ku Xidhnow, Apple isku day shabakad bulsheed ee fanaaniinta oo la bilaabay 2015 iyo albaabada loo laabay 3 sano kadib.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Apple waxay $ 50 milyan ku maalgelinaysaa madasha fannaaniinta madaxa bannaan ee UnitedMasters
The 13 2012-inch MacBook Pro hadda waa duugoobay